Kukhona nje yokudla ayisekho namuhla. Kubonakala sengathi beveza futhi akukho okunye. Futhi lapha nalaphaya, kanti nengqondo yomuntu ihlala ibheka izindlela ephumelelayo ukususa amakhilogramu ngokweqile. Ubani nje nempela owayeke wacabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyoba Japanese yasungulwa ekudleni banana isisindo ukulahleka. Phela, njengoba sazi, lezi zithelo abasakwazi okusezingeni eliphezulu kilojoule, futhi ushukela kuzo okuningi kunanoma iyiphi enye izithelo. Nokho, lokhu Ukudla kusabalala ngokushesha okukhulu emhlabeni futhi, ngokubona dieters eziningi, umzalele izithelo. Ake sibone ukuthi yini ekudleni "ku ubhanana" ngakho ukuthi kuyaphumelela, njengoba kusho.
Banana Ukudla isisindo ukulahleka
Abantu bakholelwa izinto eziningi lokhu Ukudla, cabanga ngokuningiliziwe.
Inketho 1 - Usuku emithathu banana Ukudla
essence yayo imi kanje: zingakapheli izinsuku ezintathu kuzodingeka ukuba adle ethile ubhanana, aphuze ubisi olunamafutha amancane.
Ngosuku lokuqala udinga ukudla ubhanana ezintathu, ngisho baphuze ilitha yesikimu noma ubisi 1%.
Ngosuku lwesibili ukudla ubhanana eziyisithupha futhi ubisi okuningi njengoba owokuqala.
Ngosuku lwesithathu - ubhanana ezintathu, plus ilitha ubisi.
Yilokho sonke Ukudla. Nakani iqiniso lokuthi ubisi, uma ungenawo umthande noma wena iguliswa ke, ungayithola enye by iyiphi imikhiqizo yobisi. Cishe sicabange ukuthi banana nobisi - hhayi okuhle kakhulu ukuhlanganisa imikhiqizo, ngakho ungamangali uma ngesikhathi Ukudla, kuyomelwe ukubuyisa esabekayo. Ezinsukwini ezintathu kusuka manje, yebo, abaningi musa kabusha. Noma kunjalo, lo mbhangqwana uzokwazi ukubabulala Kilos extra.
Inketho 2 - wezinsuku eziyisikhombisa banana Ukudla isisindo ukulahleka
Abanye bathi ku ezingu-7 zokugcina ku ubhanana kungenziwa ulahlekelwe isisindo-10 kilograms, ezinye, osekelwe kokuhlangenwe nakho kwabo, bathi amakhilogremu angaphezu kwayisihlanu ngeke kabusha.
wezinsuku eziyisikhombisa Ukudla imenyu ubhanana ngendlela elandelayo:
Usuku Lokuqala: iphawundi izinhlanzi abilisiwe, plus amalitha amathathu ubisi olunamafutha amancane, ubhanana 9. Yonke imikhiqizo kumele ihlukaniswe ukudla ezintathu.
Usuku Lwesibili: Inani elifanayo ubisi ubhanana, kodwa izinhlanzi kuphela amagremu amathathu namashumi kuphela.
Usuku ezintathu: ubhanana eziyisithupha plus ezimbili amalitha ubisi, futhi amagremu angamakhulu amathathu izinhlanzi.
Usuku ezine: Ubhanana eziyisithupha plus ezimbili amalitha ubisi, eziyikhulu amagremu zezinhlanzi.
Usuku lwesihlanu: ubhanana ayisishiyagalolunye plus ezimbili amalitha ubisi.
Usuku eziyisithupha: ubhanana eziyisithupha, plus ezimbili amalitha ubisi.
Usuku lwesikhombisa: ilitha ubisi plus ubhanana eziyisithupha.
Inketho 3 - Ushizi Ukudla for ubhanana kanye ubhamubhamu
Ubhanana ingasetshenziswa kwesisindo kanye cottage shizi. Kulokhu, ekudleni ihlala izinsuku 4 futhi ulahlekelwe isisindo phakathi nalesi sikhathi uyokwazi 3 kg.
Ngakho, ezinsukwini zokuqala futhi sesithathu ibhulakufesi ukudla amagremu 100 cottage shizi plus kwangangopapamusi. Ngesikhathi sokudla kwasemini, esilinganayo cottage shizi nocezu ikhabe. Ngezinye idina into efanayo ngesidlo sasekuseni.
Kodwa kumenyu izinsuku lesibili nelesine kuyinto: kubhanana kwasekuseni, ingilazi yobisi ongaphakeme lokucuketfwe fat. Ngesikhathi sokudla kwasemini: kubhanana plus iqanda abilisiwe. Eyodla - amagremu ezingamakhulu amabili inyama ebomvu, futhi ubhanana ezimbili.
Nomaphi lapho ukhetho kungakhathaliseki obakhethayo, khumbula ukuthi idina kufanele zenzeke kungakadluli 18,00. Ngemva kwalokho, ngesikhathi ukudla umgoqo umnyuziki eziphoqelelwe.
Okumbi banana Ukudla
Lokho kudla angase afanelekele ke alulona olwawo wonke umuntu. I ngokuqapha lokuqala kufanele usetshenziselwe kulabo abaphethwe kahle kungakhuphula izinga likashukela. Kungahlali ukudla okunjalo, cishe, futhi labo iguliswa izithelo ezingavamile. Banana Ukudla ngeke kusize ukunciphisa umzimba labo ukupheda esingeziwe engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Noma kunjalo, baphumelela ngokwengeziwe icala uma udinga ulahlekelwe obungu-10 kg.
Banana Ukudla isisindo ukulahleka: Izibuyekezo
Kuyi-Internet uyobe kalula ukuthole Izibuyekezo ngalokhu Ukudla. Njengoba kunoma yiliphi elinye icala, bayoba okuhle nokubi. Vele umuntu empeleni wakwazi ukunciphisa umzimba nge ubhanana, futhi omunye akazange ukukwenza: noma engaqinile ngokwanele, noma nje umzimba kuqhathaniswa ngithi goodbye kuya fat ngokweqile. Nokho, ungakhathazeki. Vele angazama ukuhlala okungenani izinsuku ezimbalwa on ukudla ukuze baqonde, kuyokusiza noma cha.
Ukudla ekudlayo: ukudweba imenyu olinganiselayo
MRI ebonisa ukuthi izitho okhalo besifazane? MRI we okhalo: ukulungiselela, ukubuyekezwa
Izigaxa emzimbeni womuntu